ငိုမယျဆို…ငိုပါ (ငိုပွီးသှားတဲ့အခါ တိတျဖို့လိုတယျ) – Shinyoon
ငိုမယျဆို…ငိုပါ (ငိုပွီးသှားတဲ့အခါ တိတျဖို့လိုတယျ)
October 23, 2020 by Shinyoon
ငိုနတေဲ့ မကျြလုံးတှရှေိရငျ …. ခဏလောကျ မကျြရညျတှသေုတျပွီး ဒီစာလေး ဆုံးအောငျ ဖတျစခေငျြတယျ
လူတိုငျး ခကျခဲနကွေတာပါပဲ ….ပွီးတော့ နာကငျြနရေတာပါပဲ မတူတာက ဒဏျရာတှမေတူဘူး အတိမျအနကျခငျြး မတူဘူး ။
တခြို့က ငါ မရှိတော့ရငျကောငျးမယျလို့ တှေးလိမျ့မယျ ။ တခြို့က ငါ့မှာ ငှတှေေ အမြားကွီးရှိရငျကောငျးမယျလို့ တှေးလိမျ့မယျ ။ သူပွနျခဈြရငျ သူသာမဖောကျပွနျရငျ သူသာ ဂရုစိုကျရငျ ဆိုပွီးတှေးနတေဲ့သူတှလေဲ ရှိနမှောပါ ။တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ဒဏျရာတှပေဲ မတူကွတာ နာကငျြနရေတာခငျြးတော့ တူတယျ ။
ဘာကွောငျ့ နာကငျြနပေါစေ … ငါ မိနျးမသားပဲ ဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ ပြော့ညံ့နလေို့မဖွဈဘူး ။ ငါ့ကို အားပေးနှဈသိမျ့မယျလူမရှိလို့ဆိုပွီး အားငယျနလေို့မဖွဈဘူး ။ ခဏတာ အခကျအခဲကို တဈဘဝစာကွီး နဲ့ လဲလိုကျလို့မဖွဈဘူး ။
နာကငျြတယျမလား …. အားရအောငျငို ။ အနားမှာရှိရငျ ကိုယျပါ ကူပွီး ငိုပေးဦးမှာ ။ ဒါပမေယျ့ မကျြရညျတှေ ခမျးတာနဲ့ ခံစားနရေတာတှအေားလုံးကို ခဏတာပဲ ဖွဈဖွဈ မပေ့ဈလိုကျတော့ ။ ကိုယျ့အိပျမကျ ကိုယျ့ရညျမှနျးခကျြ လူတိုငျးမှာရှိပွီးသားပါ တဈခါတဈရံ လူတဈယောကျအတှကျနဲ့ ကြှနျမတို့ မထေ့ားတတျကွတဲ့ အိပျမကျတှပေေါ့ ။ အဲ့ဒီအိပျမကျတှကေို တဈယောကျတညျးဆိုလဲ ဆကျပွီး အကောငျအထညျဖျောရဲတဲ့ အငျအားရှိဖို့လိုတယျ ။
ရဲရငျ့တဲ့ မိနျးမဆိုတာ …. မနာကငျြတတျတော့တဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျကို ချေါတာ မဟုတျဘူး နာကငျြနလေကျြနဲ့တောငျ အပွုံးမပကျြတဲ့ မိနျးမတဈယောကျပါပဲ ။ ထကျမွကျတဲ့ မိနျးမဆိုတာ …. အနောကျက တှနျးတငျပေးမှ အမွငျ့ကို ရောကျတာမဟုတျဘူး ကိုယျတဈယောကျတညျးဖွဈနလေညျး ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျပွီး ကိုယျ့လမျးကိုယျ ဆကျလြှောကျရဲရတယျ ။
ငိုမယျဆိုရငျ ငိုပါ …. ငိုပွီးသှားတဲ့အခါ တိတျဖို့လိုတယျ ။
ငိုနေတဲ့ မျက်လုံးတွေရှိရင် …. ခဏလောက် မျက်ရည်တွေသုတ်ပြီး ဒီစာလေး ဆုံးအောင် ဖတ်စေချင်တယ်
လူတိုင်း ခက်ခဲနေကြတာပါပဲ ….ပြီးတော့ နာကျင်နေရတာပါပဲ မတူတာက ဒဏ်ရာတွေမတူဘူး အတိမ်အနက်ချင်း မတူဘူး ။
တချို့က ငါ မရှိတော့ရင်ကောင်းမယ်လို့ တွေးလိမ့်မယ် ။ တချို့က ငါ့မှာ ငွေတွေ အများကြီးရှိရင်ကောင်းမယ်လို့ တွေးလိမ့်မယ် ။ သူပြန်ချစ်ရင် သူသာမဖောက်ပြန်ရင် သူသာ ဂရုစိုက်ရင် ဆိုပြီးတွေးနေတဲ့သူတွေလဲ ရှိနေမှာပါ ။တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဒဏ်ရာတွေပဲ မတူကြတာ နာကျင်နေရတာချင်းတော့ တူတယ် ။
ဘာကြောင့် နာကျင်နေပါစေ … ငါ မိန်းမသားပဲ ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ​ပျော့ညံ့နေလို့မဖြစ်ဘူး ။ ငါ့ကို အားပေးနှစ်သိမ့်မယ်လူမရှိလို့ဆိုပြီး အားငယ်နေလို့မဖြစ်ဘူး ။ ခဏတာ အခက်အခဲကို တစ်ဘ၀စာကြီး နဲ့ လဲလိုက်လို့မဖြစ်ဘူး ။
နာကျင်တယ်မလား …. အားရအောင်ငို ။ အနားမှာရှိရင် ကိုယ်ပါ ကူပြီး ငိုပေးဦးမှာ ။ ဒါပေမယ့် မျက်ရည်တွေ ခမ်းတာနဲ့ ခံစားနေရတာတွေအားလုံးကို ခဏတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မေ့ပစ်လိုက်တော့ ။ ကိုယ့်အိပ်မက် ကိုယ့်ရည်မှန်းချက် လူတိုင်းမှာရှိပြီးသားပါ တစ်ခါတစ်ရံ လူတစ်ယောက်အတွက်နဲ့ ကျွန်မတို့ မေ့ထားတတ်ကြတဲ့ အိပ်မက်တွေပေါ့ ။ အဲ့ဒီအိပ်မက်တွေကို တစ်ယောက်တည်းဆိုလဲ ဆက်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ရဲတဲ့ အင်အားရှိဖို့လိုတယ် ။
ရဲရင့်တဲ့ မိန်းမဆိုတာ …. မနာကျင်တတ်တော့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ခေါ်တာ မဟုတ်ဘူး နာကျင်နေလျက်နဲ့တောင် အပြုံးမပျက်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ပါပဲ ။ ထက်မြက်တဲ့ မိန်းမဆိုတာ …. အနောက်က တွန်းတင်ပေးမှ အမြင့်ကို ရောက်တာမဟုတ်ဘူး ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေလည်း ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ပြီး ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ဆက်လျှောက်ရဲရတယ် ။
ငိုမယ်ဆိုရင် ငိုပါ …. ငိုပြီးသွားတဲ့အခါ တိတ်ဖို့လိုတယ် ။
တခြို့အရာတှကေ နှဈခါ ပွနျမရတတျဘူး
ဒီတဈခါ တကယျလှတျခဖြို့ တှေးခဲ့တာ